Xianglong New Design-Optical touch insimbi engagqwali khanyisa ikhiphedi-B809-Inkampani News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Xianglong New Design-Optical touch insimbi engagqwali khanyisa ikhiphedi-B809
Isikhathi: 2019-10-18 Hits: 43
3.Ukhiye wegama lekhibhodi yekhibhodi kanye nedizayini edidiyelwe, enomsebenzi omuhle ongangeni manzi nothuli.
5. Ukudluliswa kokukhanya kwenkinobho ye-backlight grade backlight (obomvu / oluhlaza okwesibhakabhaka / oluhlaza / okumhlophe) imibala ehlukahlukene etholakalayo
Idizayini yekhibhodi engu-6.3X5, okhiye bezinombolo eziyi-10, okhiye bokusebenza aba-5 (kungenziwa futhi kube izinkinobho zomsebenzi ezi-6). Ukuhlelwa kwenkinobho kungakhiwa kabusha ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
7. Izindlela zokuxhumana zifaka izindlela zokuxhumana ze-UART ne-IIC (uma uthanda).
Okwedlule: Ama-handset we-Xianglong G wesitayela nama-cradles afakiwe ohlelweni lwekhasimende laseTurkey
Okulandelayo: I-Xianglong New stainless steel touch-screen control sensimbi ikhiphedi izokwethulwa